“တိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ်တွေမှာ သတ် မှတ်ထားတဲ့ တံဆိပ်ခေါင်း မပြည့်စုံ ရင် တရားမဝင်ဘူးဆိုတာ ဟုတ် ပါသလား ဆရာ”ဟု မိတ်ဆွေတစ် ဦးက မေးမြန်းလာပါသည်။
“ကုစားလို့လည်း ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စကို အလေးထား ဆောင်ရွက်တာ အလွန်နည်း တယ်။ အဆင်ပြေသလို လမ်း ဘေးက ဆိုင်တွေက အဆင်သင့် ရိုက်ထားတဲ့ စာချုပ်မှာပဲ အမည်၊ တန်ဖိုး၊ ရက်စွဲဖြည့်စွက်ပြီး အလွယ် တကူချုပ်ဆိုလေ့ရှိကြတယ်”
“တချို့က ပြောတော့ ယခင် ငါးကျပ်တန် အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းနဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ကတိစာချုပ် တွေ ဟာ တရားမဝင်တော့ဘူး လို့ ပြော နေကြတယ် ဟုတ်ပါသလား”
“ဒါကတော့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ကာလ နှစ်အပိုင်းအခြားကို ကြည့် မှသိမှာဖြစ်တယ်၊ တံဆိပ်ခေါင်း ခွန်ဥပဒေက ပြင်ဆင်ချက်တွေ ရှိ နေတော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နှစ် ကာလအပိုင်းအခြားအတွင်းမှာ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ကတိစာချုပ်တွေ ဖြစ်ရင်တော့ တရားဝင်မှာဖြစ် တယ်”
“ဒီခြောက်ကျပ်တန် အခွန် တံဆိပ်ခေါင်းနဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ တိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ် ကတိ စာချုပ်ဟာ တရားမဝင်ဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား”
မိတ်ဆွေဖြစ်သူက တိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ် တစ်ခုကို ထုတ်ပြပါသည်။
“ဒီစာချုပ်အရတော့ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် မေလပိုင်းက ချုပ်ဆိုထားတဲ့ ကတိစာချုပ်ဖြစ်တယ်၊ အဲဒီကာလ က ဆိုရင်တော့ ကတိစာချုပ်ဟာ အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းခြောက်ကျပ် ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်”
“ဒါဆိုရင် ဒီတိုက်ခန်း အ ရောင်းအဝယ် စာချုပ်ဟာ ဥပဒေ နဲ့ ညီညွတ်တယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့ နော်”
“အင်း-ရှင်းအောင် ပြောပြရ မယ်ဆိုရင်တော့ အနီးစပ်ဆုံး ကာလကို စပြီး ပြောရမှာဖြစ် တယ်။ ဒီမှာလည်း သူငယ်ချင်းတို့ လက်လှမ်းမီတဲ့ အဓိက အသုံးများ တဲ့ ကတိစာချုပ်ကိုပဲ အဓိကထား ပြီး ပြောပြပါမယ်”
၁၉၅၇ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေအရ ကတိစာချုပ်ဆိုရင် ထိုက်သင့်တဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ဟာ သုံးကျပ်သတ် မှတ်ထားပါတယ်၊ ကျမ်းကျိန်လွှာ၊ လက်ထပ်စာချုပ်တွေမှာတော့ တံ ဆိပ်ခေါင်းခွန် ငါးကျပ် သတ်မှတ် ပါတယ်။
၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၃ဝ ရက်နေ့မှာ ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ တံဆိပ်ခေါင်း အက် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အမှတ် ၇/၉ဝ မှာ ကတိစာချုပ် မှာ ထိုက်သင့်တဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ခြောက်ကျပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထား ပါတယ်။ ကျမ်းကျိန်လွှာ၊ လက်ထပ် စာချုပ်တွေကိုတော့ နှစ်ဆယ့်ငါး ကျပ်အဖြစ် သတ်မှတ်တာတွေ့ရပါ တယ်။ ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး ကျင့်သုံးတာဖြစ်ပါ တယ်။
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၁၂၂/၂ဝ၁၂ နဲ့ တံဆိပ် ခေါင်း အက်ဥပဒေကို အစားထိုး ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ကတိစာချုပ်ဆို ရင် ငွေကျပ်ခြောက်ရာအဖြစ် တံ ဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို သတ်မှတ်ပါတယ်။ ကျမ်းကျိန်လွှာ၊ လက်ထပ် စာချုပ်တွေဆိုရင်တော့ ငွေကျပ် နှစ်ရာငါးဆယ်အဖြစ် တံဆိပ် ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင် ရမှာဖြစ်ပါ တယ်။
ယခုလက်ရှိမှာတော့ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် တံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်အရ ကတိစာချုပ်ဆို ရင် ငွေကျပ် သုံးရာအဖြစ် တံဆိပ် ခေါင်းခွန် သတ်မှတ်ပြီး ကျမ်းကျိန် လွှာ၊ လက်ထပ်စာချုပ်တွေမှာ ငွေ ကျပ် တစ်ရာ့ငါးဆယ်အဖြစ် တံ ဆိပ်ခေါင်းခွန် သတ်မှတ်ထမ်း ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။
အဲဒီလို သတ်မှတ်ကာလအ တွင်းမှာ ထမ်းဆောင်ရမယ့် တံ ဆိပ်ခေါင်းခွန်နှုန်းအတိုင်း ထမ်း ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းမှာ ထမ်း ဆောင်ရမယ့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် နှုန်းအတိုင်း အပြည့်အဝ ထမ်း ဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ရင်တော့ အဲဒီ စာချုပ်ဟာ ဥပဒေနဲ့ မညီဘူးလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်”
“တံဆိပ်ခေါင်းခွန် အပြည့် အဝ ထမ်းဆောင်မထားတဲ့ စာချုပ် တွေကို တရားဝင်ဖြစ်အောင် ပြန် လည်ဖြည့်စွက်ထမ်းဆောင်လို့ မရ ဘူးလား”
“ကုစားလို့တော့ ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလထဲက ထင်တယ်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်း အခွန်များ ဦးစီးဌာန က နေပြီး အသိပေးကြေညာချက်ထုတ် ပြန်ခဲ့တယ်။ နေ့စဉ်ထုတ်နိုင်ငံ တော် သတင်းစာတွေမှာလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေး ခဲ့ တယ်။ အဲဒီ ကြေညာချက်အရဆိုရင် တံဆိပ် ခေါင်း လျော့နည်းထမ်းဆောင်ထား သော စာချုပ်များကို တည်ဆဲ တံ ဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးသော စာချုပ်စာတမ်းများဖြစ်စေရေးအတွက် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူ ညီချက်ဖြင့် တံဆိပ် ခေါင်းခွန် ဒဏ်ကြေးကင်းလွတ် ခွင့်ကာလကို ၃၁.၃.၂ဝ၁၆ ရက်အထိ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့တယ်”
“သတ်မှတ်ရက် ၃၁.၃. ၂ဝ၁၆ နေ့အတွင်းမှာ လျော့နည်း တဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို ဖြည့်စွက် ထမ်းဆောင်ရတဲ့ သဘောလား”
“မှန်ပါတယ်၊ ဥပမာ-၂ဝ၁၂ ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းမှာ ကတိစာ ချုပ်ကို ခြောက်ကျပ်တန်အခွန်တံ ဆိပ်ခေါင်းနဲ့ ချုပ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် အက်ဥပဒေအရ ခြောက်ရာကျပ် ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျန်တဲ့ ၅၉၄ ကျပ်ကို မြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှာ ဥပဒေနဲ့အညီ ပေးသွင်းသွားရမှာဖြစ်တယ်”
“ဒဏ်ငွေဆိုတာက ဘယ်လို လဲ”
“အဲဒီ သတ်မှတ်ရက် ၃၁. ၃.၂ဝ၁၆ ကျော်မှ ဆောင်ရွက် မယ်ဆိုရင် လျော့နည်းထမ်းဆောင် ထားလို့ ထပ်မံထမ်းဆောင်ရမယ့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်အပြင် လျော့ နည်းထမ်းဆောင်သော တံဆိပ် ခေါင်းခွန်၏ ၁ဝ ဆကို တံဆိပ် ခေါင်း အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၅ (က) အရ ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်”
“ကုစားမှုရရင်တော့ နစ်နာ မှုတော့ မရှိနိုင်ဘူးပေါ့”
“မှန်ပါတယ်-ဒါကြောင့် သတ်မှတ်ထားတဲ့ တံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေနဲ့အညီ တံဆိပ်ခေါင်း ခွန်ထမ်းဆောင်လို့ စာချုပ် ချုပ်ဆို သင့်တယ် သူငယ်ချင်း”ဟု အကြံ ပြုဆွေးနွေးလိုက်ပါသည်။
nextပထမအိမ်ထောင်မှ သားသမီးများအား အမွေခွဲမပေးရသေးသည့် မြေနှင့်အိမ်ကို ဝယ်လျှင်